MAHAJANGA : Nosokafana ny alatsinainy teo ny « Universiades Madagascar » andiany fahatelo
Ny alatsinainy faha-18 Septambra lasa teo no nanokafana tamin’ny fomba ofisialy ny « Universiades Madagascar » andiany fahatelo izay natao tao amin’ny oniversiten’i Mahajanga eny Ambondrona. 20 septembre 2017
Ny « Universiades Madagascar » moa dia fifaninanana ara-panatanjahantena ifanatrehan’ny mpianatry ny anjerimanontolo miankina sy tsy miankina amin’ny fanjakana manerana an’i Madagasikara. Tonga marobe izy ireo nanatrika ity fanokafana ity. Miisa 13 ny oniversite mandray anjara amin’ity lalao fifaninanana ity, ka ny 6 amin’izany dia oniversitem-panjakana avy amin’ny faritra 6 eto Madagasikara, ny 6 hafa kosa dia oniversite tsy miankina amin’ny fanjakana ary ny 1 dia oniversite avy ao amin’ny Nosy kaomôro.
Haharitra 6 andro ity lalao fifaninanana ity ary efa nanomboka tamin’ny alatsinainy teo izany. Isaorana, hoy ny Minisitry ny fampianarana ambony, ny oniversite ao amin’ny Nosy kaomôro namaly ny antso. Efa nampanantena kosa hoy izy ny Oniversiten’ny Nosy Maurice sy La Reunion fa ho avy amin’ny “ Universiades Madagascar” andiany fahaefatra amin’ny taona ho avy. Tonga nanotrona ny fanokafana moa ny Minisitry ny fampianarana ambony RASOZANANERA Marie Monique sy ny Minisitry ny Tanora sy ny Fanatanjahantena Jean Anicet ANDRIAMOSARISOA ary ny filohan’ny oniversiten’i Mahajanga ary ireo solotenam-panjakana eto Mahajanga.
Maro ny fanatanjahantena hatao mandritra ny fifaninanana, anisan’izany ny Baolina kitra, basket ball, Hand ball, Athletisme, Volley ball, karaté, judo sy ny maro hafa. Mampirisika sy manentana ny tanora mba hitia sy hanao fanatanjahantena ny Minisitry ny Tanora sy ny fanatanjahantena satria ny fanaovana izany dia miteraka fahasalamana sy mahatomady ny vatana sy ny saina ary izany no mampandroso lavitra. Ity lalao fifaninanana ataon’ny oniversite rehetra izao dia hoentina hampifandray sy hampiray hina ny mpianatra sy tanora.